WordPress.com? Nke a bụ ihe kpatara m ga-eji jiri ya mee ihe mbụ. | Martech Zone
Gịnị kpatara WordPress.com?
WordPress bụ otu n'ime isi ịde blọgụ nyiwe dị ma na-abịa n'ụdị abụọ, WordPress.com na WordPress.org.
Formdị mbụ, WordPress.com, bụ ọrụ azụmahịa nke na-enye n'efu ịde blọgụ ngwaọrụ (iji WordPress n'ezie) na weebụ. WordPress.com na-eji software dị ka ọrụ nlereanya (aka SaS), na-echekwa ngwanrọ ngwanrọ ịde blọgụ na ilekọta ihe dịka nchekwa na nnyefe ọdịnaya (bandwit, nchekwa, wdg).
Dị nke abụọ, WordPress.org, bụ obodo na-enyere aka ịzụlite ma lekọta ya Isi mmalite mbipute nke ngwanrọ WordPress. Dum nke WordPress ịde blọgụ ngwá ọrụ nwere ike ibudata na arụnyere na kọmputa, nkesa, ma ọ bụ Bochum na-eweta nke ị họọrọ. Ntọala ahụ dị n'aka gị ma ị ga-ahụ maka ịnye nchebe dị mkpa na nnyefe ọdịnaya.
Kedu ihe kpatara ị ga - eji họrọ nke ọzọ?
Ka anyị bido na ihe kpatara WordPress.com mbụ. Cheta, ha na-eweta sọftụwia dị njikere ịga dịka blọgụ. Ntọala ị ga-ahụ maka ya, ọ bụrụ n'ịchọrọ, na-emepụta atụmatụ nke blọọgụ gị. Ihe dị ka gburugburu ma ọ bụ nhazi dị maka ịhazi. Enwere ndetu na WordPress.com na-enye aro. WordPress.com na-enyekwa ezigbo usoro wijetị na plugins, nke bu ngw’obere ederede nke n’etinye ihe di iche-iche na oru gi. Iji maa atụ, ị chọrọ ndeksi nke blọọgụ gara aga? Enwere Ngwaọrụ Archive. Chọrọ igosi foto gị kachasị ọhụrụ site na Flickr? Enwere Flickr wijetị.
WordPress.com bụkwa azụmahịa azụmahịa, na-enye ihe ndị ọzọ iji nyere aka bulite blog gị. Ihe ndi a nwere onu ahia, obu ezie na ha adighi onu ahia obula, ma nyere aka mee ka blog gi karie. Dịka ọmụmaatụ, isiokwu ndabara dị mma iji bido ịde blọgụ. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ka ụfọdụ visuals ma ọ bụ nhazi iji dabara nke ọma n'ụdị gị, ị nwere ike ịzụta zụrụ isiokwu kachasị elu.
Mgbe ịmalitere blog na WordPress.com, na mbipute n'efu, ị ga-enweta ngalaba aha dị ka nke a: your-blog-name.wordpress.com. Ọmụmaatụ: ka o bu ndi oru ugbo.wordpress.com. Inwe aha na - non-wordpress.com, ị ga - enwe nkwalite ọrụ gị iji jiri a aha njirimara aha.
WordPress.com bụ, azụmaahịa azụmaahịa ka ha wee, site n'oge ruo n'oge, gbaa mgbasa ozi na saịtị ntanetị n'efu. You nwere ike izere ịnwe ka mgbasa ozi ndị ahụ gosi na blọọgụ gị site na ịzụta ihe ahụ Uru Njikọ. Uru Uru ahụ na-enyekwa ohere ọzọ (dị mkpa ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ foto), na-enye gị ohere ịnweta isiokwu omenala, na aha ngalaba aha njirimara.
Enwere ụfọdụ mmachi na ojiji WordPress.com ị nwere ike mkpa ịtụle. Iji ngwa mgbakwunye ọ bụla ịchọrọ agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na WordPress.com enyebeghị ya onye ọrụ ha ọrụ. Ọmụmaatụ, ị chọrọ iji SexyBookmarks ngwa mgbakwunye? WordPress.com enweghị SexyBookmarks dịka akụkụ nke ọrụ ngwa mgbakwunye ha. Chọrọ iji NextGen ngwa mgbakwunye management? Nke a kwa abụghị akụkụ nke isi WordPress.com ngwa mgbakwunye ụlọ.
Nke a apụtaghị na WordPress.com enweghị njikọ ịkekọrịta (ha na-eme, lee Ịkekọrịta) ma ọ bụ njikwa mgbasa ozi (nke a kwa, ha nwere, lee Ọbá akwụkwọ mgbasa ozi). Ihe kpatara WordPress ji egbochi ojiji nke plugins bụ n'ihi na plugins bụ sọftụwia nke a ga-ejigide oge iji hụ na ọrụ WordPress.com na-arụ ọrụ. Ikwe ka ngwa mgbakwunye ọ bụla nwere ike ime ka ọrụ WordPress.com belata na, na usoro, kpatara nsogbu na blog gị.
Kedu ihe iji WordPress.com? Nnukwu ihe kpatara ya bụ maka ụgwọ ahụ, ma ọ bụ n'efu ma ọ bụ ngwugwu kachasị elu, dị ala karịa ịnwe ụlọ na nọgide na-enwe gị WordPress.org saịtị. Chee echiche banyere ihe WordPress.com na-enye, na mbipute ha n'efu: usoro ịde blọgụ dị njikere ịga na sava weebụ ha na-elekọta ma na-elekọta. Na ngwugwu ego, na-eri ụgwọ site na $ 99 ka $ 299 (Melite 2013 03 13: $ 99 na $ 299 kwa afọ), ha na-arụ ọrụ, oge, backups, na mgbalị iji hụ na blog gị dị ma na-agwa ndị na-ege gị ntị okwu. Nwere ike mgbe ahụ lekwasị anya na ịde blọgụ, ịchọta echiche ndị ahụ na-atọ ụtọ ma soro ndị ọzọ kerịta ya.
Gini banyere WordPress.org, onye WordPress kwadoro? N'ihe niile dị n'elu na WordPress.com, gịnị kpatara ị ga - achọ iji ibudata ma dezie WordPress na akụkụ nke Internetntanetị gị?
Isi ihe mere ọtụtụ ndị ji eme nke a bụ maka ijikwa njikwa. Enwere ike iji mgbakwunye na wijetị nke ịhọrọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị bụ onye na-ese foto nke chọrọ ịmepụta veranda foto nke ọrụ gị mgbe ahụ ngwa mgbakwunye mgbasa ozi NextGen bụ ihe ịchọrọ. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi ọdịdị ahụ nke ọma na isiokwu dị ka tesis or Genesis, mgbe ahụ WordPress.org bụ maka gị.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgba ọsọ mgbasa ozi nke gị, WordPress kwadoro ya bụ ihe ịchọrọ. WordPress.com anaghị ekwe ka mmadụ gbaa mgbasa ozi Mgbakwunye ma ọ bụ mgbasa ozi ndị ọzọ yiri ya (lee anya na Advertising).
A onwe kwadoro WordPress na-enyekwu mgbanwe mgbe ọ na-abịa ntọala na nhazi. Agbanyeghị, na mgbanwe ahụ na-abịa ọrụ. Na-ahụ maka Bochum (dịka ọmụmaatụ na ọrụ dịka BlueHost), blog software mmezi dị ka mkpa (mkpụrụ post on nweta nkwalite), na backups.
Kedu nke ị ga-ahọrọ? Ọ bụrụ na ị bụ azụmahịa na-amalite ịde blọgụ mgbe ahụ, m ga-akwado WordPress.com ma lekwasị anya na ịmepụta blog gị dị ka omume. Ihe kpatara nke a bu uru nke oge gi: ichoro futz (fancy okwu maka n'efu oge) gburugburu? Ihe mgbaru ọsọ gị bụ iso ndị na-ege ntị kwurịta okwu, ndị ahịa gị, na-agbanwe agbanwe. Ihe mmefu iji bido, ọbụlagodi ngwugwu adịchaghị, dị obere ma e jiri ya tụnyere oge gị.
Ma ọ bụrụ na ị bụghị azụmaahịa na ịchọrọ ịde blọgụ, ụdị WordPress.com n'efu dị mfe ịmalite. Ọzọkwa, ọ dịghị mkpa ka ị futz, na-enye gị ohere ilekwasị anya na ọdịnaya na omume nke ịde blọgụ.
Mgbe ọnwa isii gachara, ma ọ bụ karịa, nke ịde blọgụ (kwa izu, nri?) You nwere ike ịchọtaghachi ojiji nke WordPress.com. Chee echiche banyere azụmaahịa ma ọ bụ blog mkpa dị mkpa a na-ahụbeghị. N'iburu n'uche mkpa ndị ahụ na-enweghị ike ị nwere ike ịme mkpebi na ịkwaga na blọgụ nke gị ma ọ bụ na ị gaghị. Na (nke a bụ ezigbo atụmatụ) mbugharị site na WordPress.com na WordPress.org mara mma kwụ ọtọ. Ọ ga-achọ nhazi na ule mana usoro a maara nke ọma.
Tags: kwadoroWordPressakwụkwọ ntinye akwụkwọwordpress.com
Mar 13, 2013 na 7: 11 PM
Ekwesịrị m ikwenye, 100% ekwetaghị gị na nke a, John! I gosipụtara na njikwa bụ ọghọm nke Bochum na WordPress.com - ọ bụghị naanị ịchịkwa maka wijetị na isiokwu na mgbasa ozi. Ọ bụkwa njikwa maka njikarịcha na mkpuchi. Ebe nrụọrụ onwe-kwadoro na WPEngine nwere akụrụngwa siri ike karị, njikwa ngalaba, nlekota nche, nkwado ndabere, ebe a na-echekwa ihe, njikwa njikwa njikwa, netwọọdụ nnyefe ọdịnaya, ọnọdụ nke caching system, ịnweta usoro ndekọ mgbọrọgwụ, njikwa njikwa… niile maka ihe na-erughị $ 99 kwa ọnwa. Ejila ntinye WordPress gị mee ihe site na itinye ya na WordPress.com - ọ bụ n'ezie igbu oge.
Mar 15, 2013 na 1: 16 AM
Ekwesịrị m ikwenye na Doug na nke a. Na njedebe, ọ nwere ike ọ bụghị ọtụtụ nsogbu ị ga - eso ibe gị gaa mgbe ihe niile gbadara ya, mana ị ga - enweta njikwa karịa mgbe ị na - aga ụzọ ejiri aka gị. Ugbu a, ọ bụrụ na mmadụ chọrọ inyocha WordPress ma "kpoo taya ahụ" ka ị kwuo okwu, wee hazie saịtị nkeonwe na ngwọta .com ma ọ bụrụ na ịchọghị itinye ego ọ bụla. Ọ dị mma karịa Blogger, mana ọ bụrụ na ị nwetụrụ ntakịrị ihe ị na-eme n'ịntanetị. Gaa na ngwọta .com, na onye ọ bụla chọrọ enyemaka ụfọdụ ịhazi ihe na ahazi maka ha, hapụ m ka m mara.
Mar 15, 2013 na 1: 18 AM
Ọzọkwa, WP Engine (aff njikọ), ugbu a nwere nhọrọ $ 29 / mnth maka otu saịtị. Nnukwu ọrụ, nkwado dị ukwuu.
Jun 25, 2013 na 9:59 AM
nke a bụ nnukwu edemede!
ekele maka Ama! ga-eso…